Tue-Fri 9:30 AM to 4:30 PM
မွေးသက္ကရာဇ် - 16-06-2020
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - လရိပ်ပန်းပွင့်(၂၀၁၇), Our Pleasure (၂၀၁၉), Art Expo Bagan ပြပွဲ(၂၀၂၀)
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၂၈၊၄ခ)၊ နီလာလမ်း၊ ကမာရွက်(၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မြို့။ / 095161148
Email - zarchihtwe9@gmail.com
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - ၁၉ လမ်း၊ နန်းရှေ့ နန်းဦးလွင်ကျေးရွာ၊ မန္တလေးမြို့ / 09792120310
မွေးသက္ကရာဇ် - 17-06-2020
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - စုစုပေါင်းပြပွဲ (၁၀) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - / 09777762377
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၅) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - ဌ/၅၃. ခတ္တာလမ်း၊ မြို့သစ်၊ ပြင်ဦးလွင် / 092046511
Eain Mat May
Email - Mayme007@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၇) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်-၆(ခ)၊ ၁၅၂ လမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ / 09787399010
Hein Myat Zar Lwin
Email - heinmyatlay94.hmhml@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၁၀) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ် (၅၅၉) ၊ ဘုံမာ(၁)လမ်း ၊ ဈ - ဈေးလမ်း ၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ / 09401620742
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေစု၏ (၇၅) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ ပန်းချီပြပွဲတွင် ပါဝင်ပြသခွင့်ရသည့်အတွက် အထူးဝမ်းသာဂုဏ်ယူ မိပါသည်။ မြန်မာတို့အမြတ်တနိုးထားသော ရွှေနှင့် အမေစု၏ငယ်ဘဝကို ယွန်းပန်းချီဆန်ဆန် ပုံဖော် ရေးဆွဲထားပါသည်။
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - စုစုပေါင်းပန်းချီပြပွဲ (၅) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ် (၈၂၃) ၄ ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ပျိုလမ်း အရှေ့ဒဂုံ။ / 09254126918
Hnin Yi Aye
Email - hninyeeaye18@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - ပန်းချီဝါသနာအိုး (၂၀၁၈), 2nd Art Exhibition of Artissmile Gallery (2018), ခိုကိုးရာမဲ့တိရိစ္ဆာန်လေးများ ရံပုံငွေ ပန်းချီပြပွဲ (၂၀၁၉), ရခိုင်ရံပုံငွေပြပွဲ (၂၀၁၉), A Little Watercolor (2019), မိုးမိုးအင်းလျား ၇၅ နှစ်ပြည့် (၂၀၁၉), Atmosphere in Watercolor (2019), Spectrum Art Exhibition (2019), ဆောင်းအလင်္ကာ Art Exhibition Taunggyi (2018), ဆောင်းအလင်္ကာ Art Exhibition Taunggyi (2019)
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၂၂၂)၊ ဆင်တောင်လမ်း၊ ကံကြီးရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း။ / 09428348456
Hsu Lai Yee
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်-၁၀(ခ)၊ မင်္ဂလာသိဒ္ဓိလမ်း၊ ဆရာစံတောင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ / 09420018184
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၄) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၄၂) E F4 စိမ်းလဲ့ရိပ်သာ၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ / 09973531270
သက်ဝင်ခံစားမှု - ပြည်ထောင်စုမိခင်ကြီးအား နေနှင့်လ နှစ်ပါးဆိုင် သိကြားကိုယ်တိုင် မမဲ့မိန်းမအဖြစ် နိမိတ်ဆောင် ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဂျိုးဖြူလေးက သံလွင်ခက်လေးချီလာပြီ: အမေစုအနားကပ် လာကာ ငြိမ်းချမ်းတော့မည်လို့ သတင်းစကားပါးလာခြင်း နိမိတ်ဆောင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကြီးကို မိခင်တစ်ဦး၏ မေတ္တာလက်နှင့် အုပ်မိုးထိန်းကျောင်းကာ ဘုရားသွားလှူဖို့ ဒန်းစီးလေဒီပန်းလေး များ၊ ငွေပန်းတွဲလေးများနှင့် အာဆီယံသပြေခက်လေးကိုင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (စ၊ ဓ၊ ဗ၊ ဝ) စမများ သည် ဗုဒ္ဓ၏ဂုဏ်တော်၊ ဘုန်းတော်၊ တန်ခိုးတော်တို့ဖြင့် ထုံမွမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နေရယ် လရယ် ကြယ်တာရာလေးရယ်ထည့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အာကာသ လောကကြီး၏ ဒြပ်ဝတ္ထုများ ဖြစ်ပါသည်။ အာကာသအရောင် အပြာရောင်အောက်တွင် ကမ္ဘာလုံးကြီ:လဲရှိနေခဲ့ ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ တံဆိပ်ကြီးလဲ ရှိနေခဲ့ပါသည်။ အမေစု ICJ တရားရုံးတွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စား သွားရင်ဆိုင် နေရသောအချိန်တွင် ကျွန်မသည်လည်း ကျွန်မတတ်သည့် ဝိဇ္ဇာပညာ ဓာတ်ဆင်နည်း ဖြင့် မနောအာရုဏ် စိတ်ညွတ်ကာ နေလနှစ်ပါးထည့်ဆွဲလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုမိခင်ကြီးကို ကျွန်မတို့ စရဏကျင့်ထားသူများကလည်း ဝိုင်းဝန်းထောက်ကူကာရံမိုးပေးနေကြခြင်း ဖြစ်တော့ သည်။ မြန်မာပြည်ကြီ:ကောင်းဖို့ အမေစုနှင့်အတူ ပညာရှင်များရှိနေသလို ပဌာန်းဆက်များ ကလည်း ကူညီခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Kay Khine Phyo
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်-၆၆/၆၈(က) ၊ အခန်း ၆(ဂ)၊ အင်းစိန်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ / 095059415
Email - khaimar83@gmail.com
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၂၀၀)၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ / 09699463048
Khin Htway Ye
မွေးသက္ကရာဇ် - 19-06-2020
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲပေါင်း (၄၅) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - ရွှေပေါက္ကံမြို့သစ် ၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ / 09795065302
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေစုအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ သူရဲကောင်း တစ်ယောက်သဖွယ် ခံစားထား၍ ရေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - ၁၆ အုပ်စုပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၄၅၇)၊ ဗဟိုလမ်း၊ ၃၅ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ / 09423661895
သက်ဝင်ခံစားမှု - မြန်မာပြည်တိုင်းပြည်၏အလင်းရောင် ခေါင်းဆောင်အစစ်အမှန်ဟု တင်စားကာရေးဖွဲ့ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်အစစ်အမှန်ဟုလည်းယုံကြည်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်မှတစ်ပါး ကျွန်မတို့နိုင်ငံ၏ တန်းဘိုးကို မြှင့်တင်နိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဟု အလေးအနက်ထား တင်စား၍ ကျွန်မ၏ တတ်စွမ်းသမျှပန်းချီ အနုပညာဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အသက်၇၅နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အား ဂုဏ်ပြုပါသည်။
Khin May Kyi
Email - priskmkyi@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၁၂၀) | ပထမအကြိမ်တစ်ကိုယ်တော်ပြပွဲ (၂၀၁၀) ၊ ဒုတိယအကြိမ် တစ်ကိုယ်တော်ပြပွဲ (၂၀၁၂) ၊ တတိယအကြိမ်တစ်ကိုယ်တော် ပြပွဲ (၂၀၁၅) ၊ စတုတ္ထအကြိမ်တစ်ကိုယ်တော်ပြပွဲ (၂၀၁၉) | နှစ်ယောက်တွဲပန်းချီပြပွဲ (ဆရာကိုမောင်ကျော်သန်း၊၂၀၁၁)
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၂၉) ၊ ရေကျော်လမ်း ၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ / 095154492
သက်ဝင်ခံစားမှု - မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ၏ စွပ်စွဲချက်နှင့်ပတ်သက်၍ နယ်သာလန်နိုင်ငံ THE HAGUE မြို့ရှိ ICJ တရားရုံးတွင် သွားရောက်ဖြေရှင်းနေစဉ်ကာလအတွင်း ပင်ပန်းနေသော်လည်း အားလပ်ချိန်တစ်ခဏ မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံခိုက် ပြုံးရွင်နေသောအမေစု၏ ရုပ်သွင်ဟန်ပန်ကို အထူးပင်သဘောကျနှစ်ခြိုက်မိပါသောကြောင့် ဤပန်းချီကားကိုရေးဆွဲဖြစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Khin Nan San
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - Colourful Flowers (၅)ကြိမ် / Family show (၂)ကြိမ် / Together Forever (ဆရာဦးခင်မောင်စန်းနှင့်တွဲလျက်) (၂)ကြိမ် / 60 + အမျိုးသမီးပွဲ (၂)ကြိမ် / Women shows
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - ၅၈ လမ်း၊ ၁၉ - ၂၀ လမ်းကြား၊ နန်းမြို့တော်လမ်းသွယ် - ပန်းချီစံအိမ် နန်းရှေ့၊ မန္တလေး / 09750190696
Khin Nwe Ni Lay Win
မွေးသက္ကရာဇ် - 18-06-2020
Email - khinnwenilaywin@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - တစ်ကိုယ်တော်ပြပွဲ (၁) ပွဲ ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးတွင် အုပ်စုလိုက်ပြပွဲများစွာ ပါဝင်ပြသခဲ့သည်။
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - ၃၆၂/၁၀၊ ရန်အေးလမ်း၆၊ ၅ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ / 09420155937
သက်ဝင်ခံစားမှု - ပြည်သူလူထု၏ အချစ်ကို ရရှိသူ မိခင်တစ်ဦးကဲ့သို့ သားသမီးများအပေါ် မေတ္တာထားသကဲ့သို့ ပေးစွမ်းနိုင်သူ အာဇာနည်သူရဲကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် ရဲရင့်သူအဖြစ် တင်စားပြီး ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Email - dr.ksmu@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၆) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၁၀၉)၊ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလမ်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ သံလျင်မြို့။ / 09978929717
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေစု၏ ၇၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အမှတ်တရအဖြစ် အမျိုးသမီးပန်းချီဆရာမတစ်ဦးအနေဖြင့် ပါဝင်ခွင့်ရ သဖြင့်	ဂုဏ်ယူမိပြီး အမေစု၏ချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်ဝနေသောမျက်နှာ၊ အမူအရာအား ကြိုးစားအားထုတ် ရေးဆွဲထားပါသည်။
Khin Swe Hlaing
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - မန္တလေးမြို့ / 0933121900
Khin Thaw Dar
Email - thawdar27@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - စမ်းချောင်းမြို့နယ်ပြပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - / 09259015844
Khin Yoon San
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပန်းချီပြပွဲပေါင်း (၂၃) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ် (၁၄) ၊ သစ္စာလမ်းသွယ် (၁) ၊ ရေကြည်အိုင်ရပ်ကွက်၊ ဝါယာလက် ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ / 09786780771
သက်ဝင်ခံစားမှု - အုပ်စုလိုက်ပန်းချီပြပွဲပေါင်း (၂၃) ပွဲ
Lun Kyaw Yi
Email - lunkyawyee999@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပန်းချီပြပွဲ (၃) ပွဲ ၊ ဒေါက်တာလွန်းကြွယ်နှင့်အတူ ပန်းချီပြပွဲများကိုပါဝင် ဆင်နွှဲ ခဲ့သည်။ လွန်းမိသားစုနှစ်အလိုက် ပန်းချီပြပွဲများကို (၂၀၀၇ မှ ၂၀၁၇) ထိ ပါဝင်ပြသခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ နှင့် ၂၀၀၅ တွင် လောကနတ်ပန်းချီပြခန်းတွင် တစ်ကိုယ်တော်ပြပွဲ (၂) ပွဲ ပြသ ခဲ့သည်။
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၄၀၉−၄၁၃) ၊ တောင်ငူ ၁၇လမ်း၊ ရွှေပေါက်ကံမြို့သစ်၊ မြောက်ဉက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ / 095077161
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပန်းချီပြပွဲ (၃) ပွဲ ၊ ဒေါက်တာလွန်းကြွယ်နှင့်အတူ ပန်းချီပြပွဲများကိုပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ လွန်းမိသားစုနှစ်အလိုက် ပန်းချီပြပွဲများကို (၂၀၀၇ မှ ၂၀၁၇) ထိ ပါဝင်ပြသခဲ့သည်။ 60th Myanmar Women Artists Art Exhibition တွင် (၃) ကြိမ် ပြသခဲ့သည်။ အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၂၀) ပွဲ ၊ ဧရာဝဏ်ပန်းချီ ပြခန်းတွင် (၃) ကြိမ်ပြသခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်တော်ပြပွဲများကို ၂၀၀၂ မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (၉) ကြိမ်ပြသခဲ့ပါသည်။
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၄၂၃) ၊ တောင်ငူလမ်း ၁၇လမ်း၊ ရွှေပေါက်ကံမြို့သစ်၊ မြောက်ဉက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ / 095010292
Lun Pann Che
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အဘိုးဒေါက်တာလွန်းကြွယ်နှင့်အတူ ပန်းချီပြပွဲများကိုပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ လွန်းမိသားစုနှစ်အလိုက် ပန်းချီပြပွဲများကို (၂၀၀၇ မှ ၂၀၁၇) ထိ ပါဝင်ပြသခဲ့သည်။ Golden Descendent အထူးပန်းချီပြပွဲတွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့သည်။
Lynn Min Thinn
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - ပန်းချီပြပွဲပေါင်းများစွာ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ် (၁၄၃/၂) ၊ မြိုင်တန်သာလမ်း ၊ ၁၄ ရပ်ကွက် ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ / 09448008648
သက်ဝင်ခံစားမှု - ခင်ပွန်းသည် ပန်းချီ/ပန်းပု ပညာရှင် ဦးစိုးတင့် (M.A Germany) နှင့် အမေစုနှင့်အမေစု၏ မေမေတို့နှင့် အမှတ်တရပုံရိပ်များကို လွမ်းဆွတ်သတိတရဖြင့်တင်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - ပြည်တွင်း / ပြည်ပ ပြပွဲပေါင်းများစွာပြသခဲ့သည်။
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အခန်း (၄၀၄) ၊ တိုက် (၂၂၆/၂၃၂) ၊ ၃၆ လမ်း (အပေါ်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ / 095004117
Ma Myint Khine
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၃၁) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်၁၆၂ ⁄ ၁ ၊ မြင်သာ ၁၀ လမ်း၊ ၁၄ ⁄ ၁ရပ်ကွက်၊ တောင်ဉက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ / 09976694799
သက်ဝင်ခံစားမှု - မိမိသက်တန်းအသက်၇၀ နှစ်အတွင်း မကြုံခဲ့ဘူး၊ မတွေ့ခဲ့ဘူးသော ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်သော ကြောင့် အလွန်တန်ဘိုးထားချစ်ခင်နှစ်သက်ပါသောကြောင့် ရေးဆွဲထားသောပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူ အားလုံးကို ချစ်ခင်တန်ဘိုးထားသကဲ့သို့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်ဖြင့် စောင့်ရှောက်သောကြောင့် အမေနှင့်မခြားသောအမေ ဖြစ်ပါသည်။
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၂၅) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၁၀၆၁)၊ ပုပ္ပားလမ်း၊ (၄၃) ရပ်ကွက် ၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ / 09975668060
သက်ဝင်ခံစားမှု - လေးစားစွာဖြင့်ရေးဆွဲသည်။
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - ပန်းချီဝါသနာအိုးများ (၂၀၁၈) / Artissmile 2nd Art Exhibition (၂၀၁၈) / တိ ချစ်သူများ ရံပုံငွေ ပန်းချီပြပွဲ (၂၀၁၉) / ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် ရန်ပုံငွေ (၂၀၁၉) / A Little Watercolor (၂၀၁၉) / မိုးမိုး အင်းလျား ၇၅ နှစ်ပြည့် (၂၀၁၉) / Atmosphere in Watercolor (၂၀၁၉)
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - ၁၇(က)၊ သဇင်လမ်း၊ ပန်းလှိုင်ရိပ်သာ၊ စမ်းချောင်း / 095171881
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပန်းချီပြပွဲ (၂၀) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - / 09676329459
သက်ဝင်ခံစားမှု - (ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါကင်းဝေး၍ မြန်မာပြည်ကြီးကျန်းမာပါစေ) ယခု ၂၀၂၀ ခုနှစ် ( Convid -19) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရောဂါကပ်ဆိုးကြီး ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားကူးစက်ခံနေရသေအချိန်တွင် ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်သူချစ်သူသောအမေက ရောဂါကူးစက်မှုနှောင့်နှေးအောင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်၍ လက်ဆေးခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ဖို့ သရုပ်ပြ၍ ပြည်သူများကို ပညာပေးခြင်း၊ နှာခေါင်းစည်းများကိုကိုယ်တိုင်ချူပ်၍ စံပြပြုလုပ်ခြင်းပြည်သူများကို နှာခေါင်းစည်းချူပ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပခြင်း။ Covid19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရောဂါကပ်ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင် အမေစုအနေနှင့် ပြည်သူနှင့် ပိုမိုတသားတည်းကျနီးစပ်အောင် Aung San Suu Kyi State Counseller ကိုတည်ထောင်ခြင်းကျရောက်လာသောကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီး ကြီးမားစွာမပျံ့ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ချက်များကို လေးစားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် နှာခေါင်းစီးများနှင့် ပြည်သူ့မျက်ဝန်းများအလယ်ခေါင်တွင် အမေစုကိုနှာခေါင်းစည်းလေးနှင့် လေးစားစွာမှတ်တမ်းတင်၍ပုံဖော်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Email - artistmaria@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - #ပါဝင်ပြသဖူးခဲ့သောအုပ်စုပြပွဲများ 2006 Nov Going Together 2007 Jan Page 2007 2011 Aug ပခုက္ကူရေဘေး ရံပုံငွေပွဲ 2013 May The Harmonies 2014 March The Harmonies vol.22014 June The ladies art show 2014 July သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းအမှတ်တရ ရံပုံငြွေပပွဲ 2014 Aug Made in Myanmar 2015 Sep ရေဘေးရံပုံငွေ ရာနှုန်းပြည့်အလှူ 2015 Sep Dancing Hue 2015 Sep Vote Women ရံပုံငွေပွဲ 2015 Nov ART-15 2016 March The Harmonies vol.32016 Dec Myanmar Women Artist 2017 Dec Morning Glory 2018 March မြန်မာနိုင်ငံပန်းချီပန်းပုအစည်းအရုံး နှစ်တစ်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပြပွဲ 2018 April ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ငွေရတုပြပွဲ 2018 Oct “Dancing Hue vol. 2019 July “July Brush Works” 2019 Sep “Dancing Hue vol. 2019 Dec “Harmony Spectrum” 2020 July “75 for 75th”
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - ၄၄၀/က၊ ၄ လွှာ၊ မေယုလမ်းသွယ် ၊ မြင်တော်သာလမ်းမကြီး၊ ၄/တောင်ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ် / 09795718428
သက်ဝင်ခံစားမှု - အသက်အရွယ်အရွေး လူတန်းစားမရွေးအပေါ်နူးညံ့သော မေတ္တာဖြင့် ဖြန့်ကျက် လွှမ်းခြုံပေးတတ်သူ ရန်သူကိုပင်မိတ်ဆွေဖြစ်စေသူကျေအေးလွယ်သည့် မေတ္တာနှလုံးသား၏ သူမတူသောခွန်အား ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဘာမထီနှလုံးသားတို့နှင့် ပြီးပြည့်စုံသော သူမ၏ ပုံရိပ်ကို ဖော်ညွှန်းပြသလိုသည့်အတွက် မူရင်းဓာတ်ပုံဆရာကိုသာဗျောထံ ခွင့်တောင်း ကာ ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူမျိုးဘာသာ၊ ဓလေ့၊ အသက်အရွယ်မတူညီသော သူမတို့ နှစ်ဦးကြားတွင် တူညီသော မေတ္တာနှလုံးသား၏ ပုံရိပ်သည် ကြည့်ရှုသူ၏ နှလုံးသားကိုပါ နူးညံ့ ကြည်မွေ့သွားစေသည်မို့။
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - မန္တလေးမြို့ / 092025357
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - ၆/၉၈၁၊ ကရုဏာလမ်း၊ ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး / 09969175514
Email - maywine999@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၂၀) ပွဲကျော်
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - ၁၉လမ်း၊ နန်းရှေ့ နန်းဦးလွင်ကျေးရွာ၊ မန္တလေးမြို့ / 09402663593
Me Me Tun (Phoenix)
Email - khaingmimitun13976@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုပွဲ ၂ ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - ဌ/၅၃၊ ခတ္တာလမ်း၊ မြို့သစ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ / 092046511
Mi Mi Hlaing
Email - mimipride@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲများစွာပြသခဲ့သည်။
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ် (၄၁) ၊ နီလာလမ်း ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ / 09799862232
သက်ဝင်ခံစားမှု - နှင်းဆီကြိုက်သောအမေစုအတွက် အမေ့ရဲ့ (၇၅) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ရောင်စုံ နှင်းဆီ (၇၅) ပွင့်ကို နောက်ခံထားရေးဆွဲထားပါသည်။ နောက်ခံ Galaxy ပေါ်တွင် ကြယ်ရောင် အစက်အပြောက်များသည် မြန်မာပြည်သူ/သားများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ အဝါရောင်သည် သာသနာ့ မိခင်အမေစုကို ဂုဏ်ပြုရေးဆွဲပါသည်။
Moh Moh Thein
Email - drmomothein@gmial.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပန်းချီပြပွဲ (၄) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အေ(၃) ၊ ၁၄,၁၆ ၊ ခေါင်ရမ်းလမ်း ၊ ရေကျော်(၈)ရပ်ကွက် ၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၊ရန်ကုန်မြို့ ၊ / 09785583868
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေစုကို လေးစားအားကျစိတ်ဖြင့်ရေးဆွဲပါသည်။
Email - myamoc@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲများစွာပြသခဲ့သည်။ (ရန်ကုန် + မန္တလေး)
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အခန်း(၅)၊ တိုက်(၂)၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) / 09444033556
သက်ဝင်ခံစားမှု - လှပသော၊ ထူးချွန်ထက်မြက်သော၊ ကျက်သရေရှိသော၊ မြန်မာအမျိုးသမီးများအတွက် ဂုဏ်ယူဖွယ်ဖြစ်သော The Lady နှင့် ၎င်း၏ နောက်ခံတွင် ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသော မြန်မာတို့ တန်ဖိုးထားသော ကျက်သရေရှိလှသည့် ဥဒေါင်းငှက်တို့ကို ထပ်တူပြုရေးဆွဲ သရုပ်ဖော် ထားပါ သည်။
Mya Thar Thwin
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - ၂ (အုပ်စုပွဲ)
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၄၄၇−က)၊ ဇဋိလလမ်း၊ (၁၁) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ (အနောက်)၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ ရန်ကုန်မြို့။ / 09696805793
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေစုအပေါ် လေးစားဂုဏ်ယူသော အနေဖြင့်ဆွဲခဲ့ပါသည်။ တည်ကြည်ရဲရင့်ပြီး နိုင်ငံ့အပေါ် ကရုဏာ၊ မေတ္တာတရားကြီးမားသော အမေစုအား ၇၅ နှစ်ပြည့်ခြင်းမှ အသက်ရာကျော်ရှည်စေလို သော ထာဝစဉ်အေးချမ်းပျော်ရွှင်စေလိုသော ဆန္ဒများဖြင့်ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ဝတ်လက်စား တွင် မဟူရာ၊ ပုလဲအားထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်းမှာ ရှားပါးပြီး လေးနက်သော အတွေးအခေါ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အင်္ကျီကြယ်သီးကို နိုင်ငံတော်အလံရေးဆွဲခြင်းမှာ နိုင်ငံ၏အဓိက အခန်းကဏ္ဍ တိုင်းတွင် မားမားမတ်မတ် ကာကွယ်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ပုဝါအရောင်သည် ပြည်သူ/ သားများအပေါ် နူးညံ့ချစ်ခင်စွာဖြင့် တလေးတစားဆက်ဆံတတ်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုရေးဆွဲ ခဲ့သည်။
Email - myintmyintlwin.artist @gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - ၁၄ (အုပ်စုပွဲ)
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၅၀) ၊ ၅လွှာ ၊၄၆လမ်း ၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ / 095145990
Email - nandarmyint@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - စုစုပေါင်းပြပွဲ (၃၅) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - တိုက်(ၔ) ၊ အခန်း (၁၀၂) ၊ ရွှေပေါက္ကံ (၁၄) အိမ်ရာ ၊ (၁၄) ရပ်ကွက် ၊ ရွှေပေါက္ကံမြို့သစ် ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ / 09422464591
သက်ဝင်ခံစားမှု - မြန်မာပြည်သူတို့၏ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်ဟု အမေစုအားတင်စားကာ ရောင်ခြည်ဟုအမည်ပေး ကာ (ရောင်ခြည်အသစ်) နံနက်ခင်းရောင်ခြည်ဖြင့် ရေးဆွဲထားပါသည်။
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - White Rose Art Gallery အမှတ်(၁၅)၊ ဖြူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း / 09428163024
Nang San Kham
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - စုစုပေါင်းပြပွဲ (၁၅) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - တိုက်(၂၂၅)၊ အခန်း(၁၁)၊ ရန်ငြိမ်းလမ်းသွယ်(၂)၊ အမှတ်(၆) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး။ / 09775100940
သက်ဝင်ခံစားမှု - ကမ္ဘာကပင် လေးစားချစ်ခင်ရသော ကျွန်မတို့၏နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၁၉ ရက်၊ ၆ လ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကျရောက်မည့် (၇၅)နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွက် မြန်မာအမျိုးသမီးပန်းချီဆရာမ (၇၅)ယောက်တွင် ပန်းချီ ဆရာမတစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်ရေးဆွဲခွင့်ရ၍ အလွန်ဝမ်းမြောက်မိသောကြောင့် ထိုပန်းချီ ကားလေးကို (Diamond May May)ဟု နာမည်ပေးရေးဆွဲ တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Naw Ke Do
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - ၁၀၁၆၊ ပုပ္ပါးလမ်း၊ ၄၃ ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံ / 09421040743
သက်ဝင်ခံစားမှု - တန်ဖိုးကြီးမားလှသောခေါင်းဆောင်ကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်းများစွာဖြင့်
မွေးသက္ကရာဇ် - 16-05-1981
Email - htoonay057@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - Exhibitions Group Show 2017 Dec, Morning Glory Women Artist Group Show. 2018 Fab,The Reanissance of Myanmar Art Century Celebration Art Festival. 2019 Oct, Myanmar's PRIDE 2019 Dec, Harmony Spectrum Art Exhibition by NUAC.
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - Address Building7,room 26 ,Tawwin housing.U Wizara road,(41) quarter N/Dagon Yangon. / 09782486460
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေစုပန်းချီကားကို ရေးဆွဲဖြစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မလျော့သောဇွဲ၊ ထက်သန်သော စေတနာ၊ အနစ်နာခံတဲ့စိတ်ဓာတ်၊ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာမြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးအဖြစ် လေးစားဂုဏ်ယူလွန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့အားလုံး လိုချင်တဲ့ တိုးတက် အေးချမ်းတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုရရှိဖို့ မျှော်လင့်နေတဲ့ ခံစားချက်ကို ဖြစ်စေတဲ့အတွက် ဒီပုံလေးကိုရေးဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်အသွေးစုံလင်မှုရှိခြင်း၊ စိုပြေ ပြေပြစ်ခြင်း၊ နုလွင်သော အရောင်နှင့်ပေါ်လွင်ခြင်း၊ အနေအထားကောင်းခြင်း၊ ဆင်ယင်မှုကောင်းခြင်း၊ လန်းဆန်းနေခြင်း၊ ပြုံးယောင်သန်းနေခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော အနာဂတ်ကို မျှော်လင့်သလိုရှိခြင်း၊ နောက်ခံပုံတစ်ခု လုံးအရောင်စပ်ဟပ်နေခြင်း၊ ပုံတစ်ပုံလုံးကာလာနှင့်အဝါရင့်ရောင် နှင်းဆီပန်းနဲ့လိုက်ဖက်ခြင်း တို့နဲ့အတူ အမေ့ရဲ့ကြည်လင်တဲ့ မျက်နှာလေးကို ခံစားမိတဲ့အတွက် ဒီပုံလေးကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉.၆.၂၀၂၀ မှာ ရောက်ရှိမယ့် အမေရဲ့ ၇၅ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာ ကျန်းမာပါစေလို့ ဆန္ဒပြု ရင်းရေးဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲပေါင်း(၁၀၀) ကျော်ပြသခဲ့သည်။
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - / 09777184777
သက်ဝင်ခံစားမှု - ၂၀၁၂ ခုနှစ် လှည်းကူးမြို့နယ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး လူထုဟောပြောပွဲ ကျင်းပစဉ်ပုံကို လေးစားစွာဖြင့်ခံစားရွေးဆွဲပါသည်။
Email - unitex.Hlaing@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၃) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - B-1၊ 0904, Gold City ကွန်ဒို ၊ ရန်ကင်းလမ်း ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် ၊ / 095109331
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေ၏အားမာန် ၊အမေ၏စိတ်ထား လေးစားသောအားဖြင့် ရေးဆွဲဖြစ်ပါသည်။
Email - sawnay.nuyin@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပန်းချီပြပွဲ(၂၁)ပွဲ ၊ တစ်ကိုယ်တော်ပြပွဲ (၄)ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ / 09796102183
သက်ဝင်ခံစားမှု - ၂၀၁၅ ပန်းချီပြန်လည်ရေးသည့်အချိန်မှစ၍ အမေစုပုံများကိုသာ တစ်စိုက်မတ်မတ်ရေးဆွဲလာခဲ့ပါ သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် “အမေစု” ဆိုသော ကျွန်မတို့ရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး၏ လမ်းပြပေးသော မီးရှူးတစ်ဆောင်ဖြစ်သည့်အပြင် လူသားတစ် ယောက် အနေအားဖြင့် မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာနှင့် အခြားသော အရေးမပါသောကိစ္စရပ်များအတွက် ဉပေက္ခာတရား စသည်အားဖြင့် ဗြဟ္မစိုတရားလေးပါးကိုလည်း လက်ကိုင်ထားနိုင်သူ တိုင်းပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးပုံ၊ ပြည်သူများကို ရင်ဝယ်သားကဲ့သို့ မေတ္တပေးနိုင်ပုံမှာ ကျွန်မတို့ကြုံဖူး၊ ကြားဖူးသော ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ခေါင်းဆောင်များနှင့်ပင် သူမတူနိုင်ပါ။ ယခု အမေစု၏ အသက်၇၅နှစ်ပြည့် စိန်ရတု အထူးမွေးနေ့ ရည်ရယ်၍ ပန်းချီဆရာမများနှင့် အတူ ပူးပေါင်းပြသရန် အမေ့ကို ဂုဏ်ပြု ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စိန်ရတုမှ ရတုအဆက်ဆက် အသက်ရှည်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါ သည်။
Nwe Nwe Yi
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၁၀၀) ကျော်
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - / 09254987815
Email - nyein22ei@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - ၂၀၀၃ မှ ၂၀၁၉ အထိ အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ ၃၅ ပွဲကျော်
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - ၁၃၁၊ အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ / 09773332337
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေစုရဲ့မိသားစုဝင်လေး TaiChiToe အသက်၇၀ကျော် အမေအိုအတွက် တကယ့် မိတ်ဆွေကောင်းအဖော်မွန်လေး…သားဖြစ်သူ Kimရဲ့ လက်ဆောင်လေးမို့ အဖိုးဖြတ်မရတဲ့ လက်ဆောင်မွန်လေးအဖြစ်…social media ပေါ်မှာသာကြည်နူးဖွယ်မြင်တွေ့ရပြီး အပြင်မှာ မမြင်ဖူးပေမယ့် အမေစုနဲ့ထပ်ထူချစ်ခင်မြတ်နိုးရပါတယ် ကလေးလေးရေ…..အမေစုမွေးနေ့တိုင်း အတူတူနေ့ရက်များကို ပျော်ရွှင်ကျန်းမာစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြစေ
Nyo Thein Oo
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၃၀၂)၊ ၁ရပ်ကွက် (၁၁) လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ / 095075232
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - Atmosphere Watercolor (2019) အုပ်စုလိုက်ပြပွဲများစွာပါဝင်ပြသခဲ့သည်။ / 09952521331
Phwe Phwe Kyaw (Artcoholic Phwe)
မွေးသက္ကရာဇ် - 23-06-1968
Email - phywphwekyaw@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၃) ပွဲ ၊ Online - ၂ ခု
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - တိုက်(၁၀) ၊ အခန်း (၆) ၊ ဝေဠဒဝန်အိမ်ယာ ၊ စမ်းချောင်း မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ / 09420059286
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေစုကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ ခဲမှုန့်ပန်းချီကိုရေးဆွဲထားပါသည်။
Phyo Tharaphi Htin(Dawei)
Email - phyotharaphihtin@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၁၈) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၀၀၅)၊ မြေညီထပ် ၊ တိုက်အမှတ်(၈)၊ ရန်ကြီးအောင် (၁)လမ်း၊ အောင်ဇေယျအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ / 09781757876
သက်ဝင်ခံစားမှု - "မဟာ" အမည်ရတဲ့ ဒီဖန်တီးမှုမှာ မြန်မာပြည်ကြီးအတွက် အဖေ၊ အမေရော သမီးပါ အတိုင်းထက်လွန်သော မေတ္တာတရား ကြီးမားစွာနဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့် ဆောင်ရွက်လာခဲ့တာဟာဖြင့် ဒီသမီးလက်ထက်မှာတော့ အကောင်အထည်ပေါ်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီခံစားချက်နဲ့ လေးစားမှုက အနှိုင်းမဲ့မို့ ခမ်းနားတင့်တယ်စေလိုဟန် စေတနာဖြင့် ကြိုးစားဂုဏ်ပြုရင်း ဂါရဝပြု ဖန်တီးခဲ့ခြင်းပါရှင့်၊ အမေစု တောင်းသောဆု အမြန်ဆုံးပြည့်ဝဖို့ လေးနက်စွာ ဆုတောင်းရင်း🙏🙏🙏 လေးစားစွာဖြင့်*** ဖြိုးသရဖီထင်(ထားဝယ်)
Email - artistsanlatt@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - ၁၉၈၁ မှ ယနေ့အထိ ပန်းချီအစည်းအရုံးမှပြုလုပ်သော ပန်းချီ ပြပွဲများတွင်ပါဝင်ပြသခဲ့ပါသည်။ 2010 - San Latt's 1st Solo Art Show, 2012 - San Latt's 2nd Solo Art Show, 2013 - San Latt's 3rd Solo Art Show, 2018 - San Latt's 4th Solo Art Show, 2019 - San Latt's 5th Solo Art Show.
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - IE မြေညီထပ် ဗိုလ်ယာညွန့်လမ်း ၊ ယောမင်းကြီးရပ်ကွက် ၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ / 095152759
သက်ဝင်ခံစားမှု - 2019 ICJ တရားရုံးရောက် အမေစုရဲ့ မျက်နှာလေးကို ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ သရုပ်ဖေါ်ထားပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေ video တွေထဲကနေ ဖြတ်ခနဲ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ မြင်လိုက်တာကို အတတ်နိုင်ဆုံး အမှတ်တရဖြစ်အောင် ပြန်ရေးထားတာပါ။ အသက် (၇၅) နှစ်အထိ နိုင်ငံ့တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေသည် ကို ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Sandar Win Tun
Email - misssandarwintun@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - ပြည်ပ Workshop ပွဲများ၊ အုပ်စုပြပွဲ၊ မိသားစုပြပွဲ၊ လေလံပွဲအပါအဝင်၊ ပြည်တွင်းအုပ်စုပြပွဲများတွင် ပါဝင်ပြသခဲ့ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် - ကထိက၊ ပန်းချီပညာဌာန၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - တိုက်(၂၅)၊ အခန်း(၃၀၂)၊ အင်းဝအိမ်ရာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်၊ တောင်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ / 095192049
သက်ဝင်ခံစားမှု - မြန်မာ့ဆိုရိုးစကားအရ ဖခင်ကို နေမင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မိခင်ကို လမင်းဖြင့်လည်းကောင်း တင်စားလေ့ရှိသဖြင့်၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြန်မာပြည်သူပြည်သားများက မိခင်သဖွယ် ကိုးစားယုံကြည်မှုကို ဖော်ညွှန်းသည့် အနေဖြင့် ထွန်းလင်းနေသည့် လမင်းကြီးကို နောက်ခံထားရေးဆွဲထားပါသည်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က မြန်မာပြည်ကြီးကိုမေတ္တာ၊ ကရုဏာထားကာ နှိုင်းချိန်၊ ထောက်ဆပြီး အုပ်ချုပ်စီမံပုံကို ဖော်ကျူးသည့် လက်အနေအထားရှိသည့်ပုံကို ဆီဆေးဖြင့်ရေးခြယ်ဖော်ကျူးထားပါသည်။
Email - sawthinzar09@gmail.com
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၄၃)၊ ဗိုလ်ဉာဏ(၂)လမ်း၊ အေဝမ်း၊ (၉)မိုင်၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ / 09421096481
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေစု၏၇၅ နှစ်မြောက် စိန်ရတုမွေးနေ့ အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုရန်။
Shin Min Thit
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၉) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ် (၉၂၃) ၊ မာဃ(၁၂)လမ်း ၊ (၁၂) ရပ်ကွက် ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ / 09252225981
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေ့ရဲ့မျက်လုံးအကြည့်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုသည် ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိခြင်း ၊ နှုတ်ခမ်းစေ့ပြုံးဟန်တို့၏ မာန်ပါမှုရှိခြင်း ၊ ပုံ၏အလင်း/အမှောင်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း ၊ အမေ့ရဲ့ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုကို နှစ်သက် မြတ်နိုးခြင်း ၊ နှင်းဆီနီရဲ့ရဲရင့်မှု ၊ စိမ်းဖန့်ဖန့်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုအရောင်၏အေးမြခြင်း ၊ ယခုကဲ့သို့ အေးမြမှုအပေါ်တွင် ရဲရင့်မှု ၊ မာန်ပါတဲ့အပြုံး ၊ စူးရှတဲ့အကြည့်များကို နှစ်သက်မြတ်နိုးဆုံးဖြစ်သည့် အတွက် အမေစုရဲ့ဒီပုံလေးကို ရေဆေးပန်းချီကားလေးအဖြစ် အမေစုရဲ့ (၇၅) နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှ သည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် သက်ရှည်ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Shwe Sin Aye
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - ၂၀၁၃ မှ ၂၀၂၀ ထိ တစ်ကိုယ်တော်ပြပွဲ (၁၁) ပွဲ, အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၂၀) ကျော်, International Art Fairs ပြပွဲ (၄) ကြိမ်
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - / 09771261657
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေစုရဲ့ ၇၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးကို ဂုဏ်ပြုရေးဆွဲမိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့... အမေဟာ သူ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကို တိုင်းပြည်အတွက်ပေးထားပြီး မနားမနေ အလုပ်တွေ လုပ်နေခဲ့ရတယ်။ တိုင်းပြည်တာဝန်တွေကြောင့် မောပမ်းနွမ်းနယ်နေတဲ့အမေ့ကို ခဏလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မရဲ့ အနုပညာနှင့်ဖန်တီးထားတဲ့ ပန်းခင်းတွေကြားထဲမှာ အမောပြေစေချင်မိတယ်။ ပန်းလေးတွေက အမေ့ကို ပျော်ရွှင်ပါစေစိတ်နှလုံးကို ကြည်သာပါစေ။ အမောတွေပြေပါစေ။ အမေသက်ရှည်ကျန်းမာပါစေ။ ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ တောင်းဆုချွေပေးနေကြတာကို ခံစားပြီး ဖန်တီးရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်တယ်။
Soe Soe Oo
Email - soesoeoo.eco@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၈) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - သာယာကုန်း၊ မြသိန်းတန်ဘုရားအနီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ် / 09420678771
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - ၃၀၄/၁၆ (အေ) ၊ ယုဇန ဥယျာဉ် မြို့တော် / 09252181596
သက်ဝင်ခံစားမှု - လေးစားရဆုံး၊ စံထားရဆုံး နိုင်ငံမိခင်ကောင်းပါ။ အားငယ်နေချိန် အမေစုရဲ့အတုယူဖွယ် စိတ်ဓာတ် များကိုအားယူပြီ: ပြန်လည်နိုးထရပါတယ်။ အမေစု ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် တရားမျှမှုကို ဦးတည်၍ ဆုံးဖြတ်တတ်သည်မို့ အမေစုကို ယုံကြည်သည်။ နိုင်ငံ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသူမို့ လေးစားစိတ်တွေ ဆထက်ထမ်းပိုးပါအမေစု။ ညီညွတ်ပြီး၊ တရားမျှတမှုကို ရရှိအောင်ကြိုးစားပေးနေသော အမေစု၏ဆန္ဒတွေဟာ တိုင်းပြည် အတွက်အကောင်းဆုံးမို့ ဒီထက်တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ၊ ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ၊ ဘေးရန်ခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းပါ
Email - sandy.su3@gmail.com
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - / 09450014748
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေစု၏မျက်နှာပုံတူကို မော်ဒန်ရေးနည်းဖြင့်ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ကာ နောက်ခံတွင် နက်နဲ သိမ်မွေ့သော နိုင်ငံ​ရေးပိုင်းဆိုင်ရာများကို အပြာနု၊ ပန်းနုရောင်၊ ခရမ်းနုရောင်တို့ဖြင့် ရည်ညွှန်း ထားကာ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်လေးများအား အလင်းရောင်ဘက်သန်းသည့် အဖြူနုနှင့် အစိမ်းနုတို့ဖြင့်ဖော်ညွှန်းထားပါသည်။ အမေစု၏မျက်နှာအောက်ခံကို အသားရောင်နှင့် ဆက်နွယ်သည့် အရောင်ကွဲလေးများသုံးထားပြီး အဖြူရောင်လေးဖြင့် ဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားခြင်းမှာ သီလ၊ သိက္ခာနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို ဖော်ပြလိုသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အမေစုဆိုသည်မှာ ယှဉ်တွဲမြင်ရသောရုပ်ပုံလွှာဖြစ်ခြင်းကို တင်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံအား အရောင်စုံအစက်လေးများပုံစံဖြင့် ပုံဖော်ထားခြင်းမှာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံစုစည်း နေထိုင်ပြီး အရောင်သွေးစုံလှပသောနိုင်ငံအဖြစ် ကိုယ်စားပြုခြင်းကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - ရန်ကန်ပန်းချီ/ပန်းပုကျောင်းဟောင်း(၂၀၁၀)၊ ၁၉၈၆ခုနှစ် ဆင်းကျောင်းသားဟောင်းများပြပွဲ(၂၀၁၆)၊ အမျိုးသားပြ တိုက်ဆရာဦးဘဉာဏ်ပြပွဲ(၂၀၁၇)၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု ကဇာတ်ရုံပန်းချီနှစ်(၁၀၀)ပြည်ပွဲ(၂၀၁၈)၊ ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင်ဒေးရှင်းရံပုံငွေပြပွဲ(၂၀၁၉)၊ ရခိုင်ဒေသစစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူများအတွက်ရံပုံငွေပြပွဲ (၂၀၁၉)
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - မေယု-၂လမ်း ၊ က-ရပ်ကွက် ၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ / 09973498222
သက်ဝင်ခံစားမှု - ဒီပန်းချိီကားလေးကို အမေစု အိမ်မှာ အကျယ်ချုပ် ကျနေတုန်းက အမေ့ရဲ့ ခံစားမှုကို ပုံဖော်ထားတာပါ။ လူက အကျဥ်းကျနေပေမယ့် စိတ်ကလွတ်မြောက်နေပါတယ် ဆိုတာ မျက်လုံးအိမ် တဖက်ကို ကြီးကြီးရေးပြီး အပြာရောင်သုံးပေးထားတာကတော့ အနာဂတ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မျှော်လင့်နေတယ် ဆိုတာပါပဲ ဒီပန်းချီကားမှာ ပန်းမပန်ထားပါဘူး အကျဥ်းကျနေတဲ့ အချိန်မှာ ဆိုတော့လေ။
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - / 09799688620
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေစု၏ ရဲဝံ့ ၊ တည်ကြည် ၊ မှန်ကန်ပြတ်သားမှုများနှင့် မေတ္တာတရားများထင်ဟပ်နေသည့် ဤပုံကို သဘောကျ၍ ရေးဆွဲပါသည်။
Email - thantswe17@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - Together We Can Art Exhibition (2018), Together We Can Art (2) Exhibition (2019), Every Artwork tellsastory Art Exhibition (2019), September Image (2019), Connecting Through Art (2), MWS Group Art Exhibition (2019), Art Expo Bagan (2020)
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၈၃၀)၊ ဒုတိယထပ်၊ သမာဓိလမ်း၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ / 09444451640
သက်ဝင်ခံစားမှု - I’m painting for two reasons: one, to thank you for beingathoughtful and wise leader that I respect and admire. And two, to wish youaHappy Birthday!
Thawdar Aye Tun
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲပေါင်း (၂၅) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၈၈)၊ ပတ္တမြား(၂)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက် ၊ ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ / 0943089064
သက်ဝင်ခံစားမှု - ပန်းချီကားနာမည် - မေတ္တာ သစ္စာရှင် အမေ / ရည်ရွယ်ချက် - ပြည်သူအပေါ် မေတ္တာထားပြီး နိုင်ငံအပေါ် သစ္စာရှိသော အမေရဲ့ ဂုဏ်ကိုဖော်ညွှန်းပြီး ရေးဆွဲထားပါသည်။
Thet Ngone Tun
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အမျိုးသမီးပန်းချီဆရာများပြုလုပ်သည့်ပွဲတွင် ပါဝင်ပြသခဲ့သည်။
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - / 09794263090
Email - artistthinnthinn@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - စုစုပေါင်းပြပွဲ (၂၅) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - / 09250268083
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေစု၇၅နစ်ပြည့် စိန်ရတုမွေးနေ့ အမှတ်တရပုံကို surrealism နည်းဖြင့်ရေးဆွဲထားပါသည်။ အမေစု တစ်ကိုယ်လုံးပုံ ဘေးတစောင်း အနေအထားဖြင့် ‌တောက်ပလာမည့် အနာဂတ် မြန်မာနိုင်တော်အား လှမ်းမျော် ကြည့်နေဟန် ရေဆွဲထားပါတယ်။ အမေစု နဲ့ ဒေါင်းအိုး‌ဝေ ၊ အမေစု နဲ့ လှပတဲ့ ပန်းတွေ ခွဲ ခြားမရပါ။ အမေစု ၊ပန်း၊ ဒေါင်းအိုဝေ၊ အမေစုကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထား ချစ်ခင်တဲပြည်သူ၊ တောက်ပလာမဲ့ တိုင်းပြည်အနာဂတ် တို့ကို surrealism ဟန်ဖြင့်ရေးဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေး ဆွဲရာ မှာ အဓီကဖြစ်တဲ့ အမေစုပုံကို ဖြူစင်အေးမြ သဘောထား ကြီ မြတ်ခြင်းကို ပြတဲ့အနေဖြင့် အသားရောင်ရော ဝတ်စုံရောင်ကိုပါ အဖြူထားပေးထားပါတယ်။ ပြည်သူ အများ လှပရဲဝံစွာ ဝန်းရံနေခြင်း ပြတဲ့အနေဖြင့် နှင်းဆီနီများကို ထည့်ဆွဲ ထားပါတယ်။ ဒေါင်းအိုဝေများကိုလည်း အချိတ်အဆက်မိ ဝန်းရံကာ ကွယ်နေပုံဖြင့် ရေးထားပါတယ်။
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ် ၁၃၃၆၊ ၁/၁လမ်း၊ ခေတ္တရာရပ်ကွက်၊ ပြည်မြို့။ / 095363746
သက်ဝင်ခံစားမှု - မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေ အားလုံးရှေ့မှာ အမေစုက မားမားမတ်မတ် ဦးဆောင်လျှောက်လှမ်းနေတယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပါ... 😊
Win May Aye
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - အုပ်စုလိုက်ပန်းချီပြပွဲ (၁၂) ပွဲ
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ် (၆၅) I ၊ မြလမ်း ၊ ဗဟန်းမြို့နယ် / 09451356420
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေစု (၇၅) ပြည့်မှသည် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တိုင် သက်ရှည်ကျန်းမာ၍ နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးအတွက် ထမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေခြင်း အကျိုးငှာ ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Win Win Mar
Email - dawwinwinmar09@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - ၂၀ (အုပ်စုပွဲ)
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၉၇)၊ ပျူစောထီးလမ်း ၊ ၁၀ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ / 095026867
Email - dawwinwin246@gmail.com
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အုပ်စုလိုက်ပြပွဲ (၄၅) ကျော် / 09428119072
Yi Mon (University of Culture)
Email - yimonkuma@gmail.com
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - စုစုပေါင်းပြပွဲ ၂၀ ကျော် (၂၀၁၁ - ၂၀၁၉)
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - ၃၈၃၊ ၆ လွှာ၊ သူရလမ်းနှင့်သုမင်္ဂလာလမ်းဒေါင့်၊ ၉ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ / 09450012350
Yin Mar Hlaing
ပါဝင်ပြသသည့်ပြပွဲများ - လရိပ်ပန်းပွင့် (၂၀၁၇) ၊ မ/ဥအစည်းအရုံးပန်းချီပြပွဲ(၂၀၁၈) ၊ ပန်းချီပန်းပုနှစ် (၁၀၀) ပြည့်ပွဲ (၂၀၁၈) ၊ မိုးမိုးအင်းယားအမှတ် တရ (၂၀၁၉) ၊ ၈၈၈၈ အမှတ် တရပွဲ (၂၀၁၉) ၊ Art Expo Bagan ပြပွဲ (၂၀၂၀)
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၆၁) ၊ သန္တာ (၉) လမ်း ၊ င/ရပ်ကွက် ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ / 09799515790
Email - yuthidangenge@gmail.com
လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် - အမှတ်(၈၅)အေ ၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း ၊ တံတားကြီးရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ / 09972346121
သက်ဝင်ခံစားမှု - အမေစုနှင့်သူမ၏ ခွေးလေးကို အင်တာနက်မှာ တွေ့ကတည်းက ကြည်နူးစရာမြင်ကွင်းလေး ဖြစ်သည့်အတွက် ဆွဲချင်စိတ်ဖြစ်မိပါသည်။ အမေစု၏ ခွေးလေးအပေါ် ချစ်မြတ်နိုးပုံလေးကို သဘောကျ၍ ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမေစု၏ ခွေးလေးအပေါ် မေတ္တာတရားထားရှိမှု ၊ ဂရုဏာ တရားကြီးမားမှုတို့ကို ဤပန်းချီကားလေးတွင် ပေါ်လွင်အောင်ရေးဆွဲထားပါသည်။